Inona no dikan 'ny hoe mampiaraka mahomby? Ny valin'io fanontaniana io dia miankina amin'ny fomba fijery manokana eo amin'ny fiainana sy ny tanjona ho an'ny tenanao ianao, rehefa niaraka. Misy ireo izay mahomby ny daty fotsiny raha toa ka ny vavahady mankany amin'ny fifandraisana maharitra ary na dia ny fanambadiana. Ny hafa mety hihevitra azy io ho loza raha tsy hiafara any am-pandriana. Ho an'ny sasany, ny daty dia mahomby raha nanana fotoana tsara. Na dia tsy misy antoka fa toro-hevitra manaraka ireto dia hivadika daty tsirairay ho fipoahana, dia azo antoka fa hanampy anao hampihena ny tahan'ny tsy fahombiazana mampiaraka.
Ampifanaraho ny fanantenanao ny tanjona
Toy ny tetikasa hafa ianao hiditra an-, ny fanantenanao avy ao amin'ny olona, ​​na ianao miaraka amin'ny daty tokony mifanaraka aza ny tanjona. Raha mitady ny iray alina-dia, tsy mandinika ny mpiara-miasa toy ny hoe handeha handany ny androm-piainanao aminy / azy.
Manaova ny mampiaraka notsongaina kandidà
Raha te-hampitombo ny fahombiazana ny tahan'ny, tsy mampiaraka na iza na iza toa misy. Niala tsy ho eo lisitry ny mety vita ireo rehetra izay tsy manana na inona na inona amin'ny iombonana.
Ny daty dia tsy ny fahafahana haneho ny fahaiza-tsehatra. Manao zavatra mandeha ho azy sy tsy miezaka ianao mody zavatra hafa noho ny tena dia, indrindra raha mitady fifandraisana maharitra. Ho avy ny marina avy amin'ny farany, ary ny hafa dia hahatsapa voafandrika.
Ataovy ny zavatra tsotra
Mahomby indrindra dia ny kely saina daty, tsotsotra ireo. Raha toa ka tsy misy aloha jamba tanteraka daty, mieritreritra ny tombontsoa iombonana sy tonga amin'ny asa sasany miompana hevitra izay mety hahaliana ny roa aminareo.
Hifantoka amin'ny ankehitriny
Aza mitondra ny lasa ho any amin'ny resaka tsy tapaka ary aza miala nitaraina momba ny fifandraisana tsy ho fahazarana. Na dia zava-dehibe ny mpiara-miasa roa mizara zavatra momba ny mombamomba, tsy misy olona te ho oharina amin'ny taloha. Ny ho avy dia marefo ihany koa foto-kevitra. Aza mitondra izany ianao raha tsy azo antoka fa ianareo sy ny mpiara-miasa mampiaraka dia vonona ho toy izany lohahevitra.
Jereo ny tsara indrindra
Na inona na inona lazain'ny olona, daty voalohany foana ny tarehy sy ny fahatsapana ankapobeny. Ary noho izany, handamina tena mifanaraka amin'izany: hanisy an mahaforona, manao zavatra izay toa tsara sy ny tsiky eo ianao. Na izany aza, Tsy mitsahatra mikarakara ny tenanao rehefa mieritreritra ianao amin'ny fifandraisana.
Ataovy ny tongotrareo eny an-kianja
Na inona na inona ny daty lehibe toa, mijanona ho azo. Aza maika ho any am-pandriana, fara fahakeliny, amin'ny voalohany fa tsy amin'ny daty. Aza miresaka momba ny fampakaram-bady manomboka sy ny ankizy satria tianao ny sarimihetsika ihany.
Manomana ny tenanao noho ny daty
Date fanomanana tsy ahitana fotsiny hoe madio, fofona tsara dia niandrandra marani-tsaina. Raha toa ianao ka tsy niaraka nandritra ny fotoana ela, eritrereto ny lohahevitra ny resaka mba hisorohana ny ela hafahafa mampangina.
Mandehana mihoatra ny endrika ivelany
Satria ny olona mody ho marani-tsaina, marina ny tokan-tena, izany dia tsy midika hoe tena ireo. Raha tsy misy ny zava-drehetra sy ny niampanga ridiculously rehetra, miezaka ny mamantatra ny mpandainga, ary ny hanangona fanazavana ampy mba manana hevitry ny tena manokana.
Na inona na inona no antony nahatongavanao ao amin'ny mampiaraka sehatra, aza kivy ary aza BE LOATRA. Miaraka ireo olona manodidina anareo dia tsy hampitombo ny azo antoka hoe hahomby. Bebe Kokoa, dia toa mahaliana kokoa raha toa ka manana ny fiainana ara-tsosialy hafa afa-tsy mampiaraka.